Soo dejisan Scribus 1.4.8 Standard iyo Portable – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Scribus
Scribus – software awood leh, waayo qaabka dukumentiyada heer xirfadeed. software The u saamaxaaya in ay isticmaalaan sayidkii pages iyo arrimo diyaar u qorsheeyo wax soo saarka oo tayo sare leh oo daabacan. Scribus taageertaa qaabab qoraal badan iyo qalab gaar ah oo howsha qoraalka sare. software The leeyahay format dukumenti u gaar ah oo ay taageertaa noocyada ugu, Hababka text kala duwan, blocks la arki karo iyo waxa la qariyey. Sidoo kale Scribus ku jira qalab kala duwan oo u soo jiidi qaababka, bedesho sifooyinka alaabta iyo edit dukumentiyada PDF ah.
Helitaanka oo ka mid ah arrimo page sanyihiin
Helitaanka Goluhu Baaragaraafka iyo calaamadda Hababka qoraalka
La shaqee dukumentiyada PDF ah
Abuurista soo saarka daabacay
Soo dejisan Scribus
Faallo ku saabsan Scribus
Scribus Xirfadaha la xiriira